Androidsis waa degel internet AB ah. Boggan waxaan ka taxadaraynaa inaan wadaagno dhammaan wararka ku saabsan Android, casharrada ugu dhammaystiran iyo falanqaynta alaabooyinka ugu muhiimsan ee qaybtan suuqa. Kooxda qorayaasha waxay ka kooban yihiin shucuur ku saabsan adduunka Android, iyaga oo mas'uul ka ah sheegida dhammaan wararka qaybta.
Tan iyo markii la bilaabay 2008, Androidsis wuxuu noqday mid ka mid ah bogagga tixraaca ee qaybta casriga ee Android.
Kooxda tifaftirka ee Androidsis waxay ka kooban tahay koox ka mid ah Khubaro ku takhasustay teknolojiyadda Android. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda, waad awoodaa noo soo dir foomkan si aad u noqoto tafatire.
Waxaan ku dhashay magaalada Barcelona ee dalka Spain, waxaan dhashay 1971 waxaanan aad u jeclahay kombuyutarada iyo guud ahaan aaladaha mobilada. Nidaamyada hawlgalka ee aan ugu jeclahay waa Android oo loogu talagalay aaladaha mobilada iyo Linux ee kombuyuutarrada gacanta iyo miisaska kumbuyuutarka, in kasta oo aan si fiican ugu sameeyo Mac, Windows, iyo iOS. Wax kasta oo aan ka aqaanno nidaamyadan hawlgalka waxaan ku bartay qaab is-baray, oo aan ku uruursanayo in ka badan toban sano oo waayo-aragnimo ah adduunka aaladda moobilka Android!
Qoraa iyo tifaftire ku takhasusay Android iyo qalabkiisa, taleefannada casriga ah, smartwatches, dharka la gashado, iyo wax kasta oo la xiriira geek. Waxaan ku dhiiraday adduunyada tiknoolajiyada tan iyo yaraanteydii iyo, tan iyo markaas, ogaanshaha wax badan oo ku saabsan Android maalin kasta waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu farxadda badan.
Kahor intaanan galin suuqa casriga, waxaan fursad uhelay inaan galo aduunyada cajiibka ah ee PDAs ee ay maamusho Windows Mobile, laakiin maahan kahor inaan ku raaxeysto, sida doqon, taleefankayga gacanta ee uguhoreeyay, Alcatel One Touch Easy, mobilada oo ogolaaday inuu batariga u badalo baytariyada alkaline. Sannadkii 2009-kii waxaan sii daayay taleefannadaydii ugu horraysay ee Android maamusho, gaar ahaan HTC Hero, aalad aan weli ku haysto kalgacal weyn. Tan iyo imminka, taleefannada casriga ah badan ayaa gacmahayga soo maray, si kastaba ha noqotee, haddii aan maanta la joogo shirkadda wax soo saarta, waxaan doortaa Google Pixels.
Waxaan ku bilaabay barnaamijka 'Android Dream HTC' sanadkii 2008. Qiirada aan qabay waxay dhalatay ilaa sanadkaas, waxaan haystaa in kabadan 25 taleefan oo leh nidaamkan qalliinka. Maanta waxaan baranayaa horumarinta codsiyada nidaamyada kala duwan, oo ay ku jiraan Android.
Taleefankaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa HTC Diamond oo aan ku rakibay Android. Laga bilaabo waqtigaas waxaan jeclaaday nidaamka qalliinka ee Google. Iyo, intaan isku darayo waxbarashadayda, waxaan ku raaxaystaa hamigayga weyn: taleefanka gacanta.
Hooked iyo xirmo tan iyo ... had iyo jeer! adduunka Android iyo dhammaan nidaamka deegaanka ee cajiibka ah ee ku xeeran. Waxaan tijaabiyaa, falanqeeyaa oo wax ka qoraa wax ku saabsan taleefannada casriga ah iyo dhammaan noocyada aaladaha la jaan qaada Android, agabyada iyo aaladaha. Iskuday inaad ahaato "on", baro oo lasoco dhamaan wararka.
Falanqaynta dhammaan noocyada aaladaha Android laga soo bilaabo 2010. Waa muhiim in si qoto dheer loo ogaado horumarka tikniyoolajiyadda si aad ugu gudbin karto akhristayaasha. "Wax walba maahan qeexitaanno, moobiillada waa inay jiraan khibrad" - Carl Pei.
Tijaabinta Android tan iyo waagii hore, xiisaha aan u qabo nidaamka qalliinka ee Google ayaa igu hoggaaminaya inaan isku dayo dhammaan qalabka aan awoodo. Waxaan jeclahay inaan isbarbar dhigo, sifiican u aqaan sifooyinkooda, iyo inaan ogaado waxkasta oo ay bixiyaan.
Jacaylka Android ee sanadihii la soo dhaafay wuxuu adeegsaday nidaamyo kala duwan iyo taleefannada casriga ah. Tan iyo markii loogu magac daray jalaatada ama miraha la qalajiyey, waxaan naftayda u ballanqaaday inaanan ka tagin Android. Waxaan jeclahay tikniyoolajiyadda iyo in aan la socdo wararka oo dhan.
An Amstrad wuxuu ii furay albaabada tiknoolajiyada sidaa darteedna waxaan wax ka qorayay Android muddo ka badan 8 sano. Waxaan u arkaa naftayda khabiir Android ah waxaanan jecelahay tijaabinta aaladaha kala duwan ee ku daraya nidaamkan hawlgalka.
Socdaalka, qorista, aqrinta iyo shineemada waa hamidayda weyn, laakiin midkoodna ma sameyn doono haddii aysan ku jirin aaladda Android. Waxaan xiiseynayaa nidaamka qalliinka Google tan iyo markii la aasaasay, waxaan jeclahay barashada iyo ogaanshaha wax badan oo ku saabsan, maalinba maalinta ka dambeysa.
Isku darida teknoolojiyada cusub iyo hamigeyga Android, wadaagida aqoontayda iyo khibradeyda ku saabsan OS-ga inta aan ka helayo astaamo intaa ka sii badan, waa khibrad aan jeclahay.
Waxaan jeclahay inaan la socdo teknoolojiyada cusub guud ahaan iyo gaar ahaan Android. Waxaan si gaar ah ula dhacsan yahay isku xidhka uu la leeyahay qaybta waxbarashada iyo waxbarashada, sidaa darteed waxaan ku raaxaystaa helitaanka barnaamijyada iyo waxqabadka cusub ee nidaamka hawlgalka Google ee la xidhiidha qaybta.
Cristina Torres sawir-haye
Waan jeclahay Android. Waxaan u maleynayaa in wax kasta oo wanaagsan la horumarin karo, taasi waa sababta aan qeyb fiican ugu qaato waqtigeyga barashada iyo barashada nidaamkaan ku shaqeynaya. Marka waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad kaamil ahaato khibradaada tikniyoolajiyadda Android.
Teknoolojiyaddu had iyo jeer way i xiiseyneysay, laakiin imaatinka taleefannada gacanta ee Android ayaa kaliya kordhiyay xiisaha aan u qabo wax kasta oo adduunka ka socda. Cilmi baarista, ogaanshaha iyo ogaanshaha wax kasta oo ku saabsan Android waa mid ka mid ah hamidayda.